Senator Ayuub Ismaciil Yuusuf oo la kulmay Jaaliyadda Columbus Ohio | Somali National Television - sntv.so
Home AQALKA SARE Senator Ayuub Ismaciil Yuusuf oo la kulmay Jaaliyadda Columbus Ohio
Senator Ayuub Ismaciil Yuusuf oo la kulmay Jaaliyadda Columbus Ohio
Columbus(SNTV);- Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaaladda Columbus Ohio.
Kulanka Xildhibaanka iyo jaaliyadda waxa uu ahaa mid xanbaarsanaa fariimo iyo is xogwareysi ku qotoma xaaladda dalkeena Soomaaliya.
Marti sharaf ka kala soctay qeybaha bulshada ayaa kulankan ku sugnaa waxayna si wada jir ah gacmo furan ugu soo dhaweeyeen xildhibaanka oo maalmhan socdaal kulamo xanbaarsan la qaadanayay qaar kamid ah Jaaliyadaha Mareykanka.
Xaflada soo dhaweynta Xildhiban Ayuub waxaa ka hadlay dad aad u baddan oo bulshada ka dhex muuqda, waxana ay bogaadiyeen doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee xiligan ku jira siyasadda dalka iyo sida ay in badan uga gadisanyihiin siyaasiyiin horey dalkan u soo maray.
Inta baddan waxay ku cel celinayeen dadkii hadlay ” Waxaan u baahi qabnaa in aan dalkeena ku laabano isaga oo nidaam iyo kala danbayn leh kuwa aan ka sugaynana waa adinka dhalinyarada ee u jira siyaasada dalka dhan walba”
Waxaa la weydiiyay xildhibanka Su’aalo la xariira Isbadalada iyo qaladaadka dhaxa xiliyada qaar, waxa uuna uga jawaabay dhaman si Taxadar leh.
Xildhibaan Ayuub ayaa u soo gudbiyay Jaaliyada Columbus salaan uu uga sido Madaxda Soomaaliyeed isaga oo dhanka kale ka warbixiyay halka dalku marayo, halka laga yimid iyo halka loo socdo.
Rajo wanaagsan ayuu ka muujiyay dalka isaga oo ku guubaabiyay qurbajoogta in ay dalka yimaadaan qeybna ka noqdaan isbadalka socda.
Waxa uu ahaa kulan ay ka soo qeybgalayaashu aad u xiiseynayeen kuna heleen furdado ay wax ku weydiiyaan loogana jawaabay.
Waa markii ugu horeysay ee xildhiban Ayuub uu soo booqdo Columbus tan iyo intii uu ka mid noqday xildhibaanadda aqalka sare.
Previous articleTaliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo kulan la qaatay Wafdi ka socda Booliska Turkey
Next articleShirka Horumarinta Soomaaliya oo maanta ka furmaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka